Muxuu Ramos ka yiri wararka Mbappé la xiriirinaya inuu ku biirayo kooxda Real Madrid?? – Gool FM
Muxuu Ramos ka yiri wararka Mbappé la xiriirinaya inuu ku biirayo kooxda Real Madrid??
Dajiye July 13, 2021
(Paris) 13 Luulyo 2021. Daafaca cusub kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Sergio Ramos, ayaa diiday fikradda ah in Kylian Mbappé uu ku biiro naadigiisii ​​hore ee Real Madrid.
Dhinaca kale kabtankii hore kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa wuxuu shaaca ka qaaday go’aankiisa kaga aadan in Paris Saint-Germain ay la soo saxiixato Lionel Messi.
Sergio Ramos oo ah kabtanka taariikhiga ah ee kooxda Real Madrid, ayaa xagaagan u dhaqaaqay Paris Saint-Germain, kaddib markii uu dhacay qandaraaskiisa Los Blancos, isaga oo saxiixay heshiis labo xilli ciyaareed ah oo gaaraya ilaa iyo 2023.
Magaca Kylian Mbappé ayaa inta badan lala xiriirinayay inuu ku biirayo Real Madrid, maadaama loo arko inuu yahay bar-tilmaameedka koowaad ee Los Blancos muddo dhowr sano ah.
Isla waqtigaas, kooxda Paris Saint-Germain ayaa lala xiriirinayay saxiixa Lionel Messi, kaasoo qandaraaskiisa Barcelona uu si rasmi ah u dhammaaday, waxaana uu hadda xor u yahay inuu si bilaash ah ugu dhaqaaqo koox kasta oo kale.
Sergio Ramos ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday wuxuu kaga hadlay aragtidiisa kaga aaadan heshiisyadan kor ku xusan, wuxuuna yiri:
“U dhaqaaqista Mbappé ee Real Madrid? Real Madrid waa mid ka mid ah kooxaha ugu fiican adduunka, ciyaartoydu mar uun waa inay halkaas soo maraan, laakiin maanta runtii waxaan ka doonayaa kooxdayda, dhamaanteen waxaan dooneynaa inuu nala sii joogo.”
“Go’aanka ah in la joogo ama in la baxo, waa arin shaqsiyadeed, mana aqaan waxa ku jira maskaxda Mbappé, laakiin waxaan ubaahanahay ciyaartoy waa weyn oo isaga lamid ah, waana hubaa inaan jeclaan lahaa inuu kusii nagaado Paris maxaa yeelay waan jeclahay la shaqeynta kuwa ugu fiican.”
Isaga oo ka hadlayay suurtagalnimada uu Lionel Messi ugu biiri karo Paris ayaa wuxuu yiri:
“Leo waa mid ka mid ah ciyaartoyga adduunka ugu fiican, laakiin iguma xirna aniga, waxaan ka hadli karaa kun jeer, laakiin waxba ma go’aamin karo, laakiin macquul ahaan waan jeclahay inaan ka garab ciyaaro ciyaartoyda ugu fiican.”
Sergio Ramos oo cadeeyay… (Miyuu u dabaal-degi doonaa haddii uu gool ka dhaliyo Real Madrid?)
“Ma jiro qof iga koobab badan xilli ciyaareedkan” – Jorginho oo ka hadlay Abaal-marinta Ballon d’Or